वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर ठगि गर्नेको छोरीलाई अपहरण गरेर पैसा उठाएपछि – पुरा हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर ठगि गर्नेको छोरीलाई अपहरण गरेर पैसा उठाएपछि – पुरा हेर्नुहोस
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर ठगि गर्नेको छोरीलाई अपहरण गरेर पैसा उठाएपछि – पुरा हेर्नुहोस
admin January 26, 2019 January 26, 2019 समाचार 0
काठमाडौं । राजधानीको कोटेश्वरबाट एक बालिकाको अपहरणको ७ घण्टामै प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ । आपसी लेनदेनको विषयलाई लिएर भएका अपहरणको घटनामा प्रहरीले बालिकालाई गौशालाबाट उद्धार गरेको हो । अपहरणकारीलाई भने प्रहरीले जनकपुरबाट पक्राउ गर्न सफल भएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
थापाथलीस्थित प्रसूति गृहकी चिकित्सक डा. बबिता शाहकी २ वर्षिया छोरी सन्दिज्ञा कर्णलाई जनकपुरका मनिषकुमार गुप्ताले अपहरण गरेका थिए । प्रहरीले गौशाला तिलगंगामा रहेको होटल गणेशबाट अपहरणमा परेकी बालिकाको उद्धार गरेको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले शुक्रबार बिहान साढे आठ बजेतिर अपहरण भएकी बालिकाको सकुशल उद्धार गरेको हो । तर, उनको परिवारले डेढ लाख रुपैयाँ तिरेपछि अपहरणकारीले उनलाई होटलमा छाडेर भागेका थिए । पक्राउ पर्नेमा जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ की अर्चना गुप्ता र बाबु श्रेष्ठ छन् । गुप्ता अपहरणकारी मनिषकी श्रीमति रहेको बताइएको छ ।
परिसरका अनुसार धनुषा स्थायी घर भएकी चिकित्सक डाक्टर बविता साहकी छोरीको बिहान साढे ८ बजे अपहरण भएको थियो । अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार डाक्टर बबिता बिहान ८ बजे १० वर्षीय छोरा र छोरीलाइ छोडेर घरबाट निस्किएपछि घटना भएको हो । दाजु र बहिनी खेलिरहेका बेला कोटेश्वर घर बाहिरबाट एकजना अपरिचत ब्यक्तिले बालिकालाई लिएर गएका हुन् ।
बालिकाको उद्धारमा खटिएका डिएसपी होविन्द्र बोगटीले बालिका सकुशल रहेको बताए । उनले अपहरणमा संलग्न मनिषकुमार गुप्ता फरार रहेको बताए । उनका अनुसार अपहरणपछि गुप्ताले जनकपुरमा रहेका बालिकाका बुवा इन्जिनियर सन्तोष कर्णलाइ फोन गरेर फिरौती माग भएको थियो । कर्णले त्यसको जानकारी तत्काल प्रहरीलाई गराएका थिए ।
ठगी गरेपछि अपहरण – वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाई रकम ठगेपछि बच्चा अपहरण गरेको पाइएको छ । बालिकाका बुबाले जनकपुरकै मनिशकुमार गुप्तालाई वैदेशिक रोजगारीमा माल्दिभ्स पठाइदिन्छु भनेर २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको तर पछि वैदेशिक रोजगारीमा पनि नपठाएको र पैसा पनि फिर्ता नदिएपछि बच्चा अपहरण गरेको पाइएको छ ।
मनिश कुमार यसअघि पनि वविताको घरमा एक महिना बसेर फर्किएका थिए । उनले पटक–पटक आफ्नो पैसा फिर्ता दिन माग गर्दै आएका थिए । वविताका श्रीमानले पैसा फिर्ता नदिएपछि उनी शुक्रबार बिहान मात्रै काठमाडौं आएका थिए । आएको केही समयमै उनले वविताकी दुई बर्षिय छोरी अपहरण गरेका हुन् ।
काठमाडौंमा अपहरण फिरौती जनकपुरमा- अपहरण काठमाडौंमा भएपछि गुप्ताले बालिकाका पितालाई फोन गरेर फिरौती मागेका थिए । उनले आफ्नो रकम तत्काल फिर्ता गर्न भन्दै धम्काएका हुन् । बालिकाको पिताले एक लाख पचास हजार रुपैया गुप्ताकी पत्नीको नाममा जनकपुर पठाएका थिए । सो रकम निकाल्ने र लैजाने उनकी पत्नी र अर्का सहयोगीलाई जनकपुर प्रहरीले प्रक्राउ गर्न सफल भएको हो । दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने काम भईरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
गाईलाई यत्तिकै भनिएको हैन ‘गौमाता’, भिडियो हेर्नुभएमा पक्कै पनि पग्लिनेछ तपाईको दिल
बस भित्रै अश्लील हर्कत गर्ने को हुन यिनी ? अपिल त्रीपाठिले निकाले भाइरल बसकान्डको येस्तो रिपोर्ट- सक्दो शेयर गरौ
२ घण्टा नपुग्दै भो क भो कै रहेका दाजुभाईको उ द्धार ! खु सिले रो ए दाजुभाइ, भगवान बनेर पुगिन दिदी (भिडियो हेर्नुस्)
एनसेल बम विष्फोटको सिसिटिभी फुटेज बाहिरिए पछी सबै परे चकित ,कसले गर्यो यस्तो ? – पुरा हेर्नुहोस